Semalt: राम्रो SEO प्रदर्शनको लागि Google को खोज इञ्जिन कन्सोलको अन्वेषण गर्दै
गुगल खोज कन्सोल के हो?
गुगल सर्च कन्सोल सेटअप कसरी गर्ने
एसईओ का लागि गुगल खोजी कन्सोल कसरी प्रयोग गर्ने
एसईओ को लागी गुगल खोजी कन्सोल को उपयोग को लाभ
गुगल खोज इन्जिन आज संसारमा एक अग्रणी खोज ईन्जिन हो। लाखौं व्यक्तिहरूले यसलाई दिनहुँ धेरै सामान्य प्रश्नहरूको जवाफ पाउनको लागि प्रयोग गर्दछन्, जस्तै कि कसरी वजन कम गर्ने, कलेजमा कसरी प्रवेश गर्ने, कसरी जागिर पाउने, आदि। यसको व्यापक लोकप्रियताको कारण, हरेक वेबसाइट गुगलमा उच्च श्रेणीकरण चाहन्छ। ब्रान्ड दृश्यता, यातायात, र बिक्री वृद्धि गर्न। दुर्भाग्यवस, सबै पृष्ठहरू गुगलको पहिलो पृष्ठहरूमा अवतरण गर्न सक्दैन।
गुगल वेबसाईट पृष्ठहरूको खोज इञ्जिन प्रदर्शनलाई क्रमबद्ध गर्न विभिन्न कारकहरू प्रयोग गर्दछ। यी कारकहरूमध्ये केहि वेबपृष्ठको प्रासंगिकता र यसको सामग्री, अनुक्रमणिका पृष्ठहरूको संख्या, कुञ्जीशब्द प्रासंगिकता, कुञ्जी शव्द मात्रा, र सान्दर्भिक लिंकहरू समावेश गर्दछ। गुगल खोजी ईन्जिन कन्सोलले तपाईंलाई ट्र्याक गर्न, मोनिटर गर्न, र यी सबै र अधिक सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
२. गुगल खोज कन्सोल भनेको के हो?
गुगल खोजी कन्सोल गुगल द्वारा एक अनुप्रयोग हो जुन वेबमास्टरहरूलाई गुगलमा उनीहरूको साइटहरूको प्रदर्शन ट्र्याक र बुझ्न अनुमति दिँदछ। तपाईंको वेबसाइटको लागि गुगल खोजी कन्सोल सेट अप गर्न, तपाईंले सबैभन्दा पहिले बुझ्नु पर्छ यो कसरी काम गर्दछ। यस उपकरणले साइट मालिकहरूलाई उनीहरूको साइटको दर्जाको प्रगति हेर्न, एक विशिष्ट पृष्ठमा एक आगन्तुकले कति समय खर्च गर्दछन्, र खोज इञ्जिन प्रदर्शनको बारेमा अन्य उपयोगी जानकारीको होस्ट र यो कसरी खास कुञ्जी शब्दको लागि दर्ता गर्दछ हेर्नको लागि अनुमति दिन्छ।
खोजी कन्सोलको बारेमा महान कुरा यो हो कि यसले तपाईंलाई तपाईंको समयावधि इतिहासलाई समय अवधिमा जाँच गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको साइट खराब रैंकिंगको कारण शीर्ष १० नतिजा बाहिर आएको छ, वा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंले आफ्नो स्तर निर्धारणमा प्रगति गर्नुभयो भने। त्यहाँ धेरै उप-उपकरणहरू उपलब्ध छन् तपाईंको खोज कन्सोल प्रबन्ध गर्नका लागि। केहि निःशुल्क छन् जबकि अन्य शुल्कको लागि उपलब्ध छन्।
Google. गुगल सर्च कन्सोल सेटअप कसरी गर्ने
गुगलले तपाईंको वेबसाइटमा रिपोर्टहरू सहित खोजी कन्सोल प्रदान गर्दछ एकचोटि तपाईंले यसको लागि दर्ता गर्नुभयो। यदि तपाईंसँग गुगल खोजी कन्सोलको खाता अझै छैन भने, यो सिफारिस गरिन्छ कि तपाईं यसको लागि दर्ता गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले खोजी कन्सोलको साथ दर्ता गर्नुभयो, तपाईलाई आवश्यक रिपोर्ट रिपोर्ट गर्न सजिलो छ। तपाईं रिपोर्ट पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको साइटको तथ्या .्क हेर्न सक्नुहुन्छ, र कुनै परिवर्तन गर्नुहोस् जुन तपाईं आवश्यक महसुस गर्नुहुन्छ।
तपाईंको वेबसाइटको लागि गुगल खोजी कन्सोल सेट अप गर्न तपाईंले साइन अप गर्न आवश्यक पर्दछ। यो मुख्य पृष्ठमा पाइने साधारण चरणहरू अनुसरण गरेर गरिन्छ। त्यहाँ केहि छोटो चरणहरू छन् जुन तपाईले अनुसरण गर्नु पर्ने हुन्छ तपाईको गुगल खाता सेट अप गर्नका लागि। गुगलले नि: शुल्क खाता प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई खोज इञ्जिन परिणामहरू हेर्न अनुमति दिनेछ। तपाईं टोकन सदस्यता शुल्क तिर्न र अधिक विस्तृत रिपोर्टहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
एकचोटि तपाईंको खाता दर्ता भयो, तपाईं आफ्नो साइट अनुगमन गर्न र यसलाई आवश्यकता अनुसार अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। खोजी सिर्जना गरेपछि तपाई खोजी कन्सोल रिपोर्टमा जान सक्नुहुन्छ र "सबै उपकरणहरू" लिंकमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एक पृष्ठ लोड हुनेछ र त्यसपछि तपाइँ रिपोर्ट शीर्षक अन्तर्गत "खोजी कन्सोल" लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ। तपाईलाई गुगल खोजी कन्सोलमा लगिनेछ जहाँ तपाईं आफ्नो साइटले अनुक्रमणिका गरेको किवर्डहरूको सम्पूर्ण सूची अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ।
एकचोटि तपाईंले यो क्षेत्र पत्ता लगाउनुभएपछि, तपाईंले "साइन अप" मा क्लिक गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि तपाईंको ईमेल ठेगाना र पासवर्ड प्रविष्ट गरेर। तपाईंको कोड तब तपाईंको ईमेल ठेगानामा पठाइनेछ। यसले तपाइँलाई ट्र्याक राख्न मद्दत गर्दछ तपाइँको वेबसाइट भ्रमण गर्न के खोज सर्तहरू प्रयोग भइरहेको छ।
के कन्सोल र रिपोर्ट बनाउँछ
अब जब तपाईलाई थाहा छ कि कसरी तपाइँको वेबसाइटको लागि गुगल खोजी ईन्जिन सेट अप गर्ने, यो समय रिपोर्टमा के हुन्छ पत्ता लगाउने समय हो। उदाहरण को लागी, सबै भन्दा आधारभूत रिपोर्ट तपाइँको साइट को उपयोग गरीरहेको छ कि धेरै बताउँछ। यदि तपाईंको साइटले धेरै कम आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ भने, त्यसोभए तपाईंले आफ्नो सामग्री परिवर्तन गर्न विचार गर्नुपर्नेछ धेरै व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न।
यदि तपाईंसँग धेरै आगन्तुकहरू छैनन् भने, साइट शीर्षकलाई यस्तो चीजमा परिवर्तन गर्नु सार्थक हुनेछ जुन बढी आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। यसले साइट डिजाइन परिवर्तन गर्न र ब्याकलिks्कहरू समावेश गर्न सक्दछ। तपाईंको साइटको डिजाइन परिवर्तन गर्नाले तपाईंको रैंकिंग बढाउन र दृश्यता सुधार गर्न बढी व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न सजिलो हुनेछ।
साइट डिजाइन परिवर्तन गर्नुहोस्?
यदि तपाइँलाई लाग्छ कि साइट डिजाइन परिवर्तन गर्न त्यहाँ कुनै कारण छैन भने, तपाइँले पुरानो डिजाइन राख्नु पर्छ र यसलाई अलि अपग्रेड गर्नुपर्नेछ। जहाँसम्म, यदि तपाईंसँग एक साइट छ जुन धेरै यातायात आकर्षित गर्दछ र याद गर्नुहोस् कि व्यक्तिले तपाईंको लि on्कहरूमा क्लिक गरिरहेको छैन, तपाईंले डिजाइन परिवर्तन गर्न प्रयास गर्नुपर्नेछ। गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको निर्देशनहरू ध्यानपूर्वक पढ्नु हो कि हेरेको छ कि तपाईलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर।
निर्देशनहरूले तपाइँको साइटको मेटा ट्यागमा HTML कोडबाट केहि परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्न सक्दछ। एकचोटि तपाईंले आफ्नो साइटको उपस्थिति परिवर्तन गर्नुभयो, र तपाईंसँग सबै आवश्यक कोडहरू छन् स्थानमा, तपाईंले आफ्नो वेबसाइटको लागि गुगल खोजी ईन्जिन पुन: कसरी सेट अप गर्ने भनेर जाँच गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईंसँग पहिले नै गुगलमा होस्ट गरिएको साईट छ भने, तपाईं आफ्नो वेबमास्टर खातामा जान सक्नुहुन्छ र "खोज इञ्जिनहरू" सेक्सन फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यो प्राय: जहाँ तपाइँले तपाइँको साइट को URL राख्नु पर्छ।
यहाँ तपाईले "सेटिंग्स" क्लिक गर्नुपर्नेछ र गुगल साइट इन्जिनमा सेटिंग्स स्विच गर्न उपयुक्त बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ जुन तपाई आफ्नो साइटमा सूचीबद्ध भएको चाहानुहुन्छ। यसले तपाईंको साइटलाई खोजी ईन्जिनहरूमा सूचीबद्ध गरिएको सुनिश्चित गर्दछ। जबसम्म तपाईंसँग सही सेटि haveहरू छन्, तब तपाईं देख्नुहुनेछ कि तपाईं आफ्नो साइट उपयुक्त खोज इञ्जिनमा सूचीबद्ध छ, र तपाईं आफ्नो साइटको नाम पछि प्रदर्शित "गुगल" आइकन देख्नुहुनेछ।
यो ड्रप-डाउन सूचीमा देखाइनेछ जब तपाईं विशेष खोज शब्द प्रविष्ट गर्नुहुन्छ। तपाईले यो प्रतिमा कुनै पनि अन्य साइटमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले चाहानुहुन्छ र एर्रोलाई दायाँ बाट बाँया सार्न प्रयोग गर्नुहोस् ताकि तपाइँ आफ्नो साइटमा तपाइँको आफ्नै लिंक सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं परिवर्तन आफै गर्न सक्नुहुन्न भने, Semalt यससँग तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ।
SEO. एसईओ का लागि गुगल खोजी कन्सोलको कसरी प्रयोग गर्ने
यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट इन्टरनेटमा अधिक प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले एसईओको लागि गुगल खोजी कन्सोल कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नु पर्छ। गुगल खोजी उपकरण बिभिन्न उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यसको यस ठाउँको विशेष प्रकार्य छ जुन धेरै व्यक्तिलाई थाहा छैन।
ए साइट तथ्या .्क
तपाइँ के गर्न चाहानुहुन्छ तपाइँको वेबसाइटले कति खोज इञ्जिन ट्राफिक प्राप्त गरेको छ भनेर पत्ता लगाउँदछ। यो "साइट तथ्या .्क" ट्याबमा क्लिक गरेर गर्न सकिन्छ। यहाँ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कि कति व्यक्तिले तपाईले प्रदान गरेको उत्पादन वा सेवाहरूको लागि खोजी गरेका छन्। यदि तपाइँको वेबसाइटले आगन्तुकहरूको संख्या प्राप्त गरिरहेको छैन भने तपाइँले सोच्नु पर्छ, तपाइँ केही परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
बी कोटिहरू उपलब्ध छन्
जब तपाईं एसईओको लागि गुगल खोजी कन्सोलको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईं विभिन्न कोटीहरू प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईंलाई लागू हुन्छ। तपाईं विज्ञापन गर्न को लागी कुन उत्पादन वा सेवाहरू उपलब्ध छन् भनेर हेर्न खोज्नुहुनेछ। एक पटक तपाईं उत्पादन चयन गर्न सक्षम हुनुभयो भने, तपाईंलाई त्यसपछि तपाईंको साइटमा URL प्रविष्ट गर्ने विकल्प दिइनेछ।
यो खोज ईन्जिनलाई बताउने एउटा द्रुत तरीका हो कि तपाईले गर्नु भएको खोजी सफल भयो। यदि तपाइँ URL प्रविष्ट गर्नुभयो जुन तपाइँले खोजिरहनु भएको किवर्डहरूसँग मेल खाँदैन भने खोजी असफल हुन सक्छ। यदि तपाईंलाई एसईओको लागि गुगल खोजी कन्सोल कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छैन भने, Semalt का SEO सल्लाहकारहरूले तपाईंलाई प्रक्रियाहरूको माध्यमबाट मार्गदर्शन गर्न र विविध Semalt उपकरणहरू र सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछ जुन तपाईंको वेबसाइटलाई उच्च स्तर निर्धारणको लागि अनुकूलित गर्न मद्दत गर्दछ।
SEO. एसईओ को लागी गुगल खोजी कन्सोल प्रयोगको फाइदा
गुगल खोजी कन्सोलको साथ, तपाईं क्लिकहरू वा भ्रमणहरूको संख्या देख्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको साइटमा अन्य वेबसाइटहरूको लिंकबाट आएको थियो। तपाईले आफ्नो साइटमा दर्साउने लिंकहरूको संख्या साथै ती लिंकहरूको लोकप्रियता पनि ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ; अधिक प्राधिकरण लिंक को संख्या अधिक, अधिक लोकप्रियता र ट्राफिक तपाईंको वेबसाइट प्राप्त गर्दछ। तपाई आफ्नो लिंकहरू ट्र्याक गर्न पनि सक्षम हुनुहुन्थ्यो जुन टुटेको वा हराएको हुन सक्छ। थप रूपमा, खोज कन्सोलले तपाईंलाई मद्दत गर्ने स्प्याम लिंकहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।
गुगल खोजी कन्सोलको रिपोर्ट प्रयोग गरेर तपाईले खोजशब्द अनुसन्धान र अप्टिमाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। खोजीहरूको संख्या र तपाइँको वेबसाइटमा पाइने खोजी ईन्जिन स्थितिहरू हेर्नको लागि यो पनि सम्भव छ। खोजी कन्सोलले तपाईंलाई तपाईंको एसईओ अभियानहरूको प्रगति ट्र्याक गर्न र तपाईंको कीवर्डहरू ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाइँ बिभिन्न किवर्डहरू बुझ्न सक्षम हुनुहुन्छ जुन तपाइँ तपाइँको वेबसाइटको लागि प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, तब तपाइँ नयाँ विचारहरू ल्याउन सक्षम हुनुहुनेछ जुन तपाइँको साइटको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
यस बाहेक, अन्य चीजहरू जुन तपाईं गुगल खोज कन्सोल मार्फत ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ बाउन्स दरहरूको संख्या, तपाईंको विज्ञापनको बाउन्स दर, र तपाईंको विज्ञापनहरूको CTR (क्लिक-थ्रू रेट)। CTR ले तपाईंको विज्ञापनमा क्लिक गर्ने व्यक्तिको प्रतिशतलाई दर्साउँछ। यो संख्या जति उच्च छ, धेरै व्यक्ति वास्तवमा तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गरिरहेका छन् र अधिक सम्भावित ग्राहकहरू तपाईंसँग हुनेछन्। गुगल खोजी कन्सोलले तपाईंलाई तपाईंको सामग्रीको कुन-कुन टुक्राहरू राम्रोसँग अप्टिमाइज गरिएको छ र कुनलाई परिमार्जन आवश्यक छ भनेर पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईं आफ्नो साइट र वेबपृष्ठहरू खोजी ईन्जिनको आवश्यकताहरूमा उपयुक्त बनाउन चाहनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले गुगल खोज कन्सोलको फाइदा लिनुपर्नेछ। गुगल खोजी कन्सोलमा विविध उप-उपकरणहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइटको प्रदर्शन ट्र्याक गर्न सक्षम गर्न सक्दछ। त्यस बाहेक, गुगल खोज कन्सोलले तपाईंलाई जैविक र सशुल्क ट्राफिकको मात्रा देख्न मद्दत गर्दछ जुन बिभिन्न स्रोतहरू र कीवर्डहरूबाट आउँदछ। तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा भ्रमण गर्ने संख्या र तपाईंले पाउनुहुने पृष्ठहरूको संख्या पनि ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ।